तिथि मेरो पत्रु »5सस्तो शीतकालीन तिथि विचार
5 सस्तो शीतकालीन तिथि विचार
छुट्टी जयकार लागि मौसम टिस, प्रियजन संग जाडो मजा र खर्च समय. तपाईं मलाई जस्तै एक विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने, जो पनि शौचालय कागज खरीद वहन गर्न संघर्ष, त्यसपछि तपाईं दुवै रमाइलो हो र आफ्नो वालेटमा भाँच्ने छैन कि जाडो मिति खोजी गरिरहनु. तपाईं भाग्यमानी हुनुहुन्छ. यी पाँच मिति विचार सस्तो हो र यस छुट्टी आफ्नो सम्बन्ध छुनेछ.
1. सँगै जिंजरब्रेड घर बनाउन
आफ्नो प्यारी दाँत मा लिप्त, र झिल्काहरू एक जिंजरब्रेड घर को निर्माण संग उड गरौं. ईन्जिनियरिङ् प्रतिभा को आफ्नो कमी चिन्तित? कुनै गनगन, तपाईं आवश्यक सबै सामाग्री समावेश जो यी महान जिंजरब्रेड किरा छन्, र एक Easy-to-पढ्न निर्देशन पाना (अधिकांश पनि चित्रहरु समावेश). भन्दा कम लागत $20, किरा भन्दा सुपरमार्केट मा उपलब्ध छन्, शिल्प भंडार, र पनि अनलाइन. केही छुट्टी धुनों धारण र निर्माण प्राप्त! यस खाद्य सृष्टि भेला को दोस्रो शानदार भाग यो मुंहतोड र सँगै यो निल्न छ. पक्कै ठूलो खाद्य को एक प्रतिज्ञा र एक महान समय.
2. हट चकलेट, cuddles र एक छुट्टी चलचित्र
कुनै कुराले एक तातो पेय र प्रेमको आगोको आवेग जस्तै चिसो धड्किन्छ. ठीक सायद पनि तीव्र. के म अर्थ आफ्नो विशेष कसैसित cuddling र तातो चकलेट को एक कप आनंद ले खुर्सानी जाडो मौसम देखि आफ्नो अंदर न्यानो गर्न सक्ने छ. एक क्लासिक छुट्टी फिल्म जस्तै जोडें एघार, यो एक अद्भुत जीवन हो, एक्लै घर, कसरी कैसे Grinch चुराई क्रिसमस चोरेछ वा एक क्रिसमस कथा र यो अन्तिम मिति रात छ. लागत धेरै कम, आफ्नो प्रियजनको गुणस्तर समय र घनिष्ठता मा धनी हुँदै गइरहेका बेला तपाईं पैसा बचत गर्न.
3. सबै राम्रो रोशनी हेर्न nighttime पैदल लागि जाने
उत्सव सजावट हिउँद यति सुन्दर तुल्याउने एक भाग हो. तपाईं जहाँ कुनै कुरा, घर पछि घर संभावना छन्, सडक सडक पछि रोशनी लहरै, गरगहना, आनन्दित चित्र मूलढोकाको सामुन्ने र सबै कुराहरू. साँझ सम्म प्रतिक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि एक पैदल शहर लागि वा आफ्नो छिमेकी मा जानुहोस् र प्यारा छुट्टी रोशनी र सजावट हेर्दा आनन्द (तपाईं प्राप्त गर्न सक्छन् कति ती ठूलो inflatable व्यवस्था को देख्न). तपाईं घर सबै भन्दा राम्रो छुट्टी सेटअप छ जो मा मतदान गरेर एक खेल मा यो बनाउन पनि सक्छन्. केही लागत, यस सरल मिति सजिलै आफ्नो सम्बन्ध प्रकाश सक्छ.
4. हिम साहसिक
सडक ठूलो केही साहसिक लागि एक बाहिर प्रेम हिउँ कम्बल फाइदा लिन र आफ्नो संग बिटा. पार देश स्कीइंग जान, आफ्नो स्थानीय पार्क वा ट्रेल्स मा पैदल यात्रा वा हिउँ shoeing. Tobogganing को एक दिन आफ्नो बाल्यकाल पहाडी तल उडान र reliving Enjoy. सँगै snowman निर्माण वा एक फोर्ट वा एक आउटडोर बरफ रिंक मा स्केटिंग जाने. लागत धेरै कम, प्रकृति सम्बन्ध फस्टाउन लागि सबै भन्दा राम्रो खेल को मैदान को एक साबित गर्न सक्छन्.
5. DIY शिल्प
इन्टरनेट असंख्य मुक्त DIY छुट्टी शिल्प विचारै र निर्देशन धारण. एक दम्पतीले रोचक व्यक्तिहरूलाई चयन र एक शिल्प स्टोर गर्न शिर वा तपाईं घर वरिपरि छन् सामाग्री प्रयोग र धूर्त प्राप्त! सार्वजनिक स्कूल मा फिर्ता कला र शिल्प को एक प्रशंसक कहिल्यै थिए भने, बस यो केहि नया प्रयास गर्न सधैं राम्रो भन्ने सम्झना, र आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र बाहिर कदम. तपाईं अपराध मा आफ्नो साथी छ छौँ वाहेक तपाईं बाहिर मदत गर्न.
यी पाँच मिति विचार सस्तो हो, सरल र यो हिउँदमा मौसममा तपाईं र तपाईंको प्रियजनको लागि एक राम्रो समय ग्यारेन्टी हुनेछ. छुट्टियों आनन्द र आफ्नो सम्बन्धको आनन्द उठाउन.
12 जब अनलाइन डेटिङ सुझाव उत्साहित रहन को लागि
महिला एक वैवाहिक मा के चाहन्छौ?